Shiinaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Alwaaxa Lagu Sameeyo Atc 3 dhidibka Mashiinka Alwaaxa 1325 CNC Router Soo saaraha iyo Badeecada | Baaq
3D CNC router Mashiinka
Sale Hot Door Samaynta Machine Atc 3 dhidibka Mashiinka Alwaaxa 1325 CNC router
Aagga shaqada 2500 * 1300mm / 3000 * 1500mm / 3000 * 2000mm / 4000 * 2000mm
Nidaamka xakamaynta Xakamaynta Ncstudio, ikhtiyaar u ah NK280, SYNTEC
Mootada iyo wadayaasha Mootada tallaabada / Mashiinka adeegga
Jidka tareenka Tareenka hagaha laba jibaaran ee Taiwan HIWIN
Habka gudbinta Qalabka rakhiis ee saxda ah
Qaab dhismeedka miiska Miiska Vacuum iyo T-slot
Xawaaraha shaqada 8-15m / min
Qaab dhismeedka miiska Mawjadda Birta ah
Aaladda dunmiiqa 3.5kw / 4.5kw / 5.5kw / 9kw dunmiiqa qaboojinta
Xawaaraha ugu badan 24000 RPM
Wadista Joogtaynta Doorsoome Soo rogaal rogayaasha / Delta inverter
Nidaamka qaboojinta Hawada korontada qabow
#Pneumatic 3 madaxyada dunmiiqa qaboojinta:
3.5kw / 4.5kw / 5.5kw dunmiiqa qaboojinta
# Khadadka Hagaha Tooska ah:
PMI / THK biraha hagaha ee mashiinka saxda ee xawaare sare leh. Hawlgalka keydinta tamarta iyo cimriga dheer ee adeegga.
#Yaskawa mootada adeegga iyo wadayaasha:
Waxaan qaadaneynaa Japan YASKAWA Servo motor, sumcadda adduunka ee caanka ah ee loo yaqaan 'servo motor' oo loogu talagalay saxnimadeeda cajiibka ah, orodka siman, ma laha gariir xawaare hooseeya, hoos u dhac la'aan xitaa xawaare sare, karti xamuul xoog leh, waxqabad xakameyn badan oo lagu kalsoonaan karo, iwm
Xawaare sare, mashiinka CNC oo sax ah. Horey u fiiri 256 baloogyo horay loo sii xisaabiyay halka xakamaynta quudinta ay hagaajinayso raadraaca iyo saxnaanta qaabdhismeedka. Maamul joornaalka qalabka, nolosha aaladda, iyo inbadan.
WMH Herion rakibaadda buugaagta heesaha iyo pinion ka wadayaasha waxay bixiyaan dardargelin sax ah oo firfircoon.
Naqshadeynta waara waxay xaqiijineysaa nolol adeeg dheer leh dayactir ugu yar. Awood u leh inuu si sax ah u dhaqaaqo culeysyo culus.
# Vacuum saar:
Orod aamusnaan oo qabow. Naqshadeynta 100% ee saliida-yar iyo nolosha dhaadheer waxay xaqiijineysaa dayactirka ugu yar.
(1) Warshadaha alwaaxa:
Mashiinka xardha waxaa loo isticmaali karaa xardho alwaax, sanduuqyada dahabka alwaax, alaabta qurxinta iyo dahabka la xardhay iyo wixii la mid ah.
(2) Warshadaha xayeysiinta:
Mashiinka xardha waxaa loo isticmaali karaa in lagu xardho calaamado kala duwan, astaamo, calaamado, darbiyada, farsamada iyo qurxinta, qurxinta guriga.
(3) Warshadaha kale:
Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sawirro, muuqaallo muuqaal ah, sawir gacmeedyo, shaabado iyo farshaxanno kale oo farshaxan iyo farshaxanno farshaxanno iyo wax soo saar kale ah.
Waxaan had iyo jeer halkaan u joognaa inaan ku siino wixii macluumaad ah ee aad u baahan tahay markii ugu horreysay, oo aan ku siinno talo-bixinno xirfad-yaqaan ah iyadoo loo eegayo baahiyahaaga dhabta ah ee bilaashka ah;
Waxaan la macaamili doonnaa dhammaan wax soo saarka iyo rarka maraakiibta, ka dib markii wax walba diyaar yihiin, waxaan kuu sheegi lahayn inay wax walba si fiican ugu socdaan halkan;
Iibinta ka dib:
Waxaan bixin doonnaa Buug-gacmeed ku shaqeynaya Ingiriisiga.
4.Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid intaad isticmaaleyso ama dayactireysid, injineeradeenna ku hadli kara af-ingiriisiga aad u wanaagsan ayaa kaaga jawaabi lahaa khadka tooska ah ama wicitaannada.
5.Marantin warranty waa laba sano.Haddaba haddii mashiinkaagu leeyahay waxyeellooyin aan ula kac ahayn, waxaan ku siin lahayn qaybo bilaash ah.
Haddii mashiinkaagu uu leeyahay dhibaatooyin waaweyn haddii si uun loo helo, injineeradeennu halkaas ayey u imaan lahaayeen si ay u xalliyaan oo ay u hagaajiyaan.
Maxaan fiiro gaar ah u leenahay markaan rakibeyno router alwaaxa?
Kadib alwaax CNC router waa la iibsaday, waa wax dabiici ah in la rakibo oo la qaldamo. Xitaa haddii soo saaruhu uu bixiyo adeegyadan oo kale, waxaan u baahan nahay inaan iskudayno. Sidaa darteed, waa inaan baranno sida loo rakiboalwaax CNC router si sax ah. Marka, waxa muhiimka ah waa in fiiro gaar ah loo yeesho marka la rakibayo a alwaax CNC router?
1. Ha rakibin alwaax CNC router inta lagu jiro hillaaca ama onkodka, oo ha ku rakibin bareesada korontada meel qoyan, hana taaban fiilada korantada ee aan caymiska lahayn, haddii kale shilalka shoogga korantada ayaa si fudud u dhici doona.
2. Rakiibiyaha ah alwaax CNC router waa inuu lahaadaa faham qoto dheer oo ku saabsan CNC router mashiinka, oo aad awood u leedahay inaad ku shaqeyso oo aad u isticmaasho iyadoo loo eegayo qeexitaannada si loo yareeyo suurtagalnimada shilalka.
3. Awoodda koronto ee alwaax CNC router waxaa laga rabaa inuu noqdo 210V-230V. Haddii korantada korontada aan degganeyn ama ay jiraan qalab koronto awood leh oo hareeraheeda ah, korantada la nidaamiyay waa in lagu rakibaa iyadoo la raacayo hagidda xirfadleyda.
4. Qolof ah alwaax CNC router wuxuu ka samaysan yahay bir, sidaas darteed siligga dhulka waa inuu ku xirnaadaa si loo hubiyo badbaadada wax soo saarka. Fiilada fiilada ku xiran waa in la shaqeeyaa marka korontadu go'antahay, oo shaqada si toos ah ayaa loo mamnuucay.
5. Qayb ka mid ah qaabdhismeedka CNC router waxay qaadataa aluminiumta duulista hawada, kuwaas oo yara jilicsan oo jilicsan, markaa ha isticmaalin xoog badan markaad rakibayso boolal si aad uga fogaato inaad siibato.
Hore: Qashin aruuriyaha
Xiga: 3 Mashiinka Mashiinka Xardho CNC dhidibka CNC Mashiinka Jikada Golaha MDF
madax badan iyo dunmiiqa CNC router
Mashiinno badan oo mashiinno router ah
Mashiinka dariiqa qalabka guryaha
Mashiinka Mashiinka CNC 4 dhidibka EPS ee xumbo, alwaax, A ...
CNC router 3 dhidibka EPS xumbo Goynta Machine dhudhun ...
APEX CNC Router Multi -ads 3D oo leh 12 Spindles ...
Aad Loo Isticmaalay Auto Qalabka Beddelaya Wood Design Engra ...